ဧကရာဇ်မိဖုရားကြီး Kunaichō ဆေးရုံသို့ ခွဲစိတ်မှုအပြီး တိုးတက်မှုအတည်ပြုချက်လာယူ !!! - JAPO Japanese News
သော 11 Sep 2020, 12:59 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဧကရာဇ်မိဖုရားကြီးဟာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ Kunaichō ဆေးရုံသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
မနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ မျက်စိအတွင်းတိမ်နဲ့ရင်သားကင်ဆာအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှုပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေတိုးတက်မှုကို စစ်ဆေးအတည်ပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဧကရာဇ်မိဖုရားကြီးဟာ ယနေ့မနက် ဂျပန်စံတော်ချိန် ၁၀း၃၀ မိနစ်လောက်မှာ ဇီဝဗေဒသုတေသနဌာနသို့သွားတဲ့ ဧကရာဇ်နဲ့အတူ ကားတစ်စီးတည်းမှာတွေ့ရပြီး ဧကရာဇ်အိမ်တော်သို့လည်ပတ်ကာ၊ Kunaichō ဆေးရုံသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဧကရာဇ်မိဖုရားကြီးဟာ မနှစ်က ၆ လပိုင်းမှာ မျက်စိအတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်မှုခံယူရပြီး၊ နောက်ထပ် ၉ လပိုင်းမှာတော့ ရင်သားကင်ဆာရဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုပါခံယူရကာ, ဆေးရုံသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားပြီး ခွဲစိတ်မှုအခြေနေတိုးတက်မှုရှိမရှိ လာရောက်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Kunaichō ဆေးရုံအရ၊ ဧကရာဇ်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာ မနက်နဲ့ညနေခင်းအိမ်ရဲ့ဝန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းစတဲ့ အေးဆေးစွာနဲ့နေထိုင်ဖြတ်သန်းကြပေမဲ့၊ ဧကရာဇ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း နောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေပြဿနာရှိမရှိစစ်ဆေးမှုနဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်သွားဖို့ အစီအစဥ်တွေချမှတ်ထားပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဧကရာဇ်ကတော့ Naruhito ဧကရာဇ်ဖြစ်ပြီး၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားရတဲ့ ဧကရာဇ်မိဖုရားကြီးကတော့ လက်ရှိဧကရာဇ်ရဲ့ မိခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး အထွေထွေမေ့ဆေးခွဲစိတ်မှုကို ‌ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်လူမျိုး !!!!
စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဂျပန်လူမျိုး ပရဟိတ ဆရာ၀န်
ဧကရာဇ်မင်းကိုခစားရင်း စည်းစိမ်တွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ “ အိုနိုးနော့် ခိုမချိ” …ဧကရာဇ်မင်းအနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့…
တစ္ဆေ၊ သရဲ တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတို့ရေ ဒီလိုကင်မရာမျိုးလိုချင်လား ?
ကွာခြားချက်ကိုပြောနိုင်သလား?… နောက်ဆုံးပေါ် virtual model
နှစ်ကုန်နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်တွေမှာ အရေးကြီးလူနာတွေကိုလက်ခံပေးတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကို ယန်းသောင်း ၃၀ ထောက်ပံ့ပေးမည်။
လုံ့လကြီးတဲ့ ဆာမူရိုင်း (or) ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပင်ပန်းတဲ့နံနက်ခင်း !!!
Hatsune Miku (初音ミク) နဲ့အတူတူကကြမယ်
Osaka တွင်နေထိုင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင် (၇) ခု
(၂၉) ရက်နေ့၊ သေဆုံးသူ ၉၆ ဦးရှိပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၃၅၃၄ ဦးရှိ
Hawaii ရဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်က Made in Japan ဖြစ်နေခဲ့ !?
လိုချင်တယ်လို့ ဆန္ဒပြုခဲ့တဲ့ ယန်း၇.၄၈ သန်းရှိ ဆင်းတုရုပ်ပွားတော်က တကယ်ပဲရောက်လာတော့ ဒုက္ခရောက်ရပြီ .. ..